Sawirro: Wacbuudhan oo shuruud adag hordhigi doona Harti Abgaal - Caasimada Online
Sawirro: Wacbuudhan oo shuruud adag hordhigi doona Harti Abgaal
Muqdisho (Caasimada Online) – Kulankaan ayaa waxaa isku yimid beesha Wacbuudhab Abgaal jifooyinka ay ka kobben tahay kaasoo looga hadlaayay sidii hab nabadeed loogu dhamayn lahaa dagaal beeleedkii ka dhacay Degamda Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe kaaso u dhaxeeyay laba beelood oo walaalo ah wada dagana tuulooyin hoos yimaada Degmada Cadale.
Oday dhaqameedyadii goobta ka hadlay oo uu ka mid ahaa Nabadoon Xuseen Jilicoow ayaa sheegay in ay ka beel ahaan soo dhaweeynayaan talaaboo walba oo loo qaadi karo dhanka nabadda si mar kale looga hortago in dhiig kale ku daadato degmada Cadale.
Nabadoonka ayaa sheegay in ay beel ahaan carabka ku adkeeynayaa in wixii Qiraallo iyo Qorraalba ah sida uu hadalka u dhiga oo ay labada jifoo ee dagaalamay horay ugu hishiiyeen in marka hore la fuliyo si markaas horay loogu sii dhaqaaqo in la dhameestiro wixii dhiman.
Nabadoon Cumar Ibraahim Cosobow oo ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda tuulada Koogaar ee Cadale ayaa sheegay in ay soo dhawaynayaan in si banadeed looga hishiiyo dhibaatadii ka dhacday Cadale balse waxa uu hadlkaasi raaciyay in cidii labada garab fulin waysa hishiisyada la gaaray amaba la gaari doono in ay noqon doonto dimbiile loona baahnaan doono in wax laga qabto.
Bil ka hor ayeey ahayd markii dagaallo soo noq noqday ay ka dhaceen Degamada Cadale kaasoo sababay in ay ku dhintaan dad ka badan toboneeyo halka ay kuwo kalana ku dhaawacmeen iyadoo mid ka mid ah tuulooyinka Cadale la qabadsiiyay dab taasina ay sababatay in ay ku bas ba’een dhamman guryihii ku yaalay tuuladaasi oo lagu qayaasay 500 oo guri.
Maamulka Hirshabeele ayeey u muuqatay in uu ku fashilamay ka hortagista colaadiisa oo ahayd mid muddo soo jiitamaaysay ciidamo beeladyaduna ay muddo is horfadheen difaacyana isugu jireen balse uusan Maamulka Hirshabeele qaadin wax tilaabo muuqda ah ee lagu baajin karay dagaaladaasi.